Boliiska Switzerland ayaa baaray xafiisyada Uefa. - BBC News Somali
Boliiska Switzerland ayaa baaray xafiisyada Uefa.
Xafiisyada xiriirka kubbadda cagta ee Yurub ayaa waxaa baaritaan ku sameeyay boliiska dalka Switzerland kaddib markii magaca xoghayihii guud ee horelaga helay waraaqo ay qarsoodi kuX heshay sharikad xagga sharciga qaabilsan ee dalka Panama.
Markii uu Uefa u shaqeynayay, Infantino waxaa uu wax ka saxiixay heshiis xuquuqda television lagu bixinayay sanadkii 2006 oo UEFA la gashay laba nin oo ganacsato ahaa, kuwaas oo markii dambe ay FBI-du ku eedeysay musuqmaasuq.
Infantino, oo hadda madax ka ah xiriirka kubbadda cagta adduunka ee Fifa, waa uu beeniyay inuu wax khalad ah sameeyay.
Uefa waxay sheegtay inay bixinayso wixii dokumenti ay hayso ee boliisku ay u baahan yihiin.
Sharikad la yiraa Cross Trading - oo ay leeyihiin Hugo Jinkis iyo wiilkiisa, Mariano - waxay iibsadeen xuquuq TV oo ay ku baahin karaan ciyaaraha kubbadda cagta Uefa ee Champions Leaguesanadkii iyagoo bixiyay lacag dhan $111,000.
Hase ahaatee waxay isla markiiba ka sii iibiyeen television laga leeyahay dalka Ecuadori oo lagu magacaabo Teleamazonas oo ay ku siiyeen $311,170.